Taksiga mustaqbalka waa qeyb kamid ah hada (I): Cabify | Wararka IPhone
Taksiga mustaqbalka waa qeyb kamid ah hada (I): Cabify
Waxaan bilownay taxane aan u maleynayo inay runtii xiiso yeelan doonaan kaas oo aan ku eegi doonno codsiyada ugu weyn ee rakaabka gaadiidka laga adeegsado adduunka oo dhan. Oo waxaan ku bilaabi doonnaa barnaamij ah, annaga oo aan ahayn kan ugu buuqa badan, ku leh joogitaan muuqda Spain iyo Latin America: Cabify.
Intaas oo dhan waa la ogyahay Uber gudaha Isbaanish Waxay la kulantay khaladaad ka badan intii ay ka filaysay maamulka, waana taas in kasta oo la bixiyo adeeg si cad uga sarreeya tan tagaasida dhinac kasta (xogta waxaa xaqiijin kara qof kasta oo adeegsaday labada adeegba), oo ka socda Ururada maamula tagaasida ayaa sharci ahaan ku adkeystay inay isku dayayaan inay baalasha ka jaraan shirkada weyn ee Waqooyiga Ameerika. Uber wuxuu ku soo laabtay rukhsadaha VTC ee Madrid, laakiin Cabify waa beddel dhab ah oo shaqeynaya, shaqeynaya, oo joogitaanka magaalooyin ka badan shirkadda Travis Kalanick.
2 Magaalooyin badan
Haddii ay jirto hal shay oo la mahadiyo markii la isticmaalayo nidaamka gaadiidka rakaabka, waa in wax waliba deg deg iyo fudeyd yihiin. Cabify wuxuu u shaqeeyaa sida saxda ah Uber ama Lyft: Waxay na ogaanaysaa barta aan asal ahaan ka soo jeedno, waxaan galnaa barta aan u socono, waxaan helnaa sicir waxaanna sugeynaa gaari inuu na soo qaado. Bixinta waxaa si otomaatig ah loo sameeyaa marka la dhammaystirayo safarka ama kaar ama PayPal, wax alla wixii aannu doonno.
Faa'iidooyinka laga leeyahay taksiga ayaa umuuqda kuwo iska cad, laakiin waxaa si aad ah loo adkeeyay markaan ogaanay taas 9kiiba 10 kiis waxaan raaci doonnaa gaari ka fiican, in aan kala dooran karno adeegyada kala duwan iyadoo ku xiran hadba waxa aan u baahanahay ama aan dooneyno inaan bixino, in gaariga uu leeyahay muraayadaha muraayadaha leh si uu noosiiyo asturnaan ama in darawalkeenu uu kujiro suud oo uu na siiyo biyo macdan ah hadii aan rabno inaan biyo siino. Waxaas oo dhan lacag la’aan, dabcan.
Faa'iidada weyn ee Cabify ee laxiriirta Uber ee Spain waa inay kujirto magaalooyin badan sida Valencia, Barcelona ama Malaga, halka Uber maanta ay ka shaqeyso kaliya Madrid. Sidoo kale, waxaa jira dalal Latin America ah oo Cabify ay ku shaqeyso guul la taaban karo, sidaa darteed hadda waa arrin qof walba inuu go'aansado adeegga uu adeegsanayo iyadoo kuxiran halka aan joogno.
Waxaa jira jirrabaadda lama huraanka ah ee taksi taksi Halkaas ayey ku taal, laakiin anigu ma noqon doono midka aan sameeyo. Waxaan qaatay taksiyo badan, waxaanan raacay darawallo taksi oo cajiib ah, in kastoo ay run tahay in saamiga safarrada qanacsanaantu ay aad uga hooseeyaan kuwa adeegyada sida Cabify. Hadana hadaan ka fikirno, xaqiiqadu waxay tahay in taksi uusan garanayn sida loola qabsado suuqa, uu yimid goor dambe uuna isku dayay inuu joojiyo dhiigbaxa dalabyada iyo dalabaadka maamulka. Laakiin horumarka waa mid aan la joojin karin mustaqbalkana waxaa iska leh Uber, Lyft ama Cabify.
Cabify waxay ubaahantahay soo dejinta barnaamijka iyo diiwaangelinta - labadaba waad sameyn kartaa laga soo xigtay maxaa ka mid ah 6 hadiyad safar ah-. Haddii aad doorbideyso inaad soo dejiso barnaamijka oo aad iska diiwaangeliso adigoon hadiyad deyn ah, sidoo kale waad sameyn kartaa dhib la'aan Halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Taksiga mustaqbalka waa qeyb kamid ah hada (I): Cabify
Muxuu ku siiyay Cabify inaad geliso qodobkaan oo marka hore uusan bixin wax macluumaad ah oo faa iido leh tan labaadna ay tahay gabi ahaanba xayeysiin "bilaash"
Waxaad awalba dhigi laheyd qoraallo xayeysiin ah, sicirada taksiyada rasmiga ah, oo ka raqiisan oo bixiya canshuuro kala duwan. Marka lagu daro inaad haysato taksi rasmi ah, oo aan qiimo ka badnayn inta kale ee taksiyada rasmiga ah, waxaad soo jeedineysaa in cabify uu yahay taksi xilligan iyo mustaqbalka, marka ay jiraan dhowr meelood oo dhaqdhaqaaq.
Dhiirigelinta lacagta madow ... weyn! Xusuusnow cabify iyo uber markaad shil gasho oo caymiska uusan ku daboolayn, ama markaad hawlgabto oo aysan jirin lacag aad ku bixiso hawlgabkaaga
Pd: maxaa lagugu siiyay xayeysiintan?
Ku jawaab Miquel
Waxaan ku noolahay magaalo ku taal Latin Amerika halkaas oo bedelkan loo arko adeeg weyn. Xusuusnow in xirfadda darawallada taksi-dhaqameedka aysan ahayn tan ugu wanaagsan. APP-kan waxaan ku arki karnaa tababarka darawalnimada iyo tayada iyo raaxada gawaarida. Marka lagu daro la qabsiga heerarka maxalliga ah, raaxada iyo amniga ayaa ka jira aagaggaas.
Wuxuu ka digay inaan lacag la i siinin faallooyinka, waxaan u qoraa xaqiiqda fudud ee kor u qaadida beddelka sidee tahay adiga.
Chrome ee macruufka waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo taageerada furayaasha QR
PDF Pro 2, waa bilaash wakhti xadidan